सनातन धर्म रक्षार्थ जिवन त्याग्न तयार छुः पुष्पराज पुरुष - Rastriya Samachar
सनातन धर्म रक्षार्थ जिवन त्याग्न तयार छुः पुष्पराज पुरुष
शनिवार, ९ मंसिर 10:59 PM
पुष्पराज पुरुष एक दशक भन्दा अघिदेखि आश्रमको जिवन बिताईरहनु भएको छ । योग ध्यान र साधना उहाँको दैनिक क्रियाकलाप हो । उहाँ बाल ब्रम्हचारी हुनुहुन्छ । घर परिवार, व्यापार व्यवसाय सबै छोडि सक्नुभएको पुरुषलाई देशको राजनितिक अवस्थाले छोएको छ । विगत केही वर्ष यता उहाँ राप्रपाको केन्द्रिय सदस्य हुँदै राप्रपाको धर्म संस्कृति संगठन प्रमुख पनि हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय धर्म सभादेखि आफ्नै संगत संस्कृति समेतमा नेतृत्व गरिसक्नुभएको पुरुषलाई अहिले चुनावी माहोलले पुरै लागेको छ । उहाँ राप्रपाको प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ । अहिले उहाँ राप्रपालाई भोट माग्दै हिड्नु भएको छ, उहाँसँग ताजा सबरको कुराकानी ।
तपाई आश्रममा साधा जिवन बिताईरहनुभएको व्यक्ति किन राजनितिमा आउनु भयो ?
देश काल र परिस्थितिले मान्छेलाई अनेक मोडमा पु¥याउछ । मैले भौतिक जिवनलाई त्यागी अध्यात्मलाई अंगिकार गरेको हुँ तर पनि मेरो सामजिक दायित्व पनि त छ । अहिले देशलाई विधर्मीहरुले घेरेको अवस्था छ । सनातन्त्र धर्मलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र देशी विदेशीहरुबाट भईरहेका छ । समाजिक सन्तुलन नै खलबलिएको छ । यस्तोमा मैले सबै कुरा विर्सिएर कसरी आश्रमको जिवन बिताउन सक्छु । म धार्मिक व्यक्तित्व भएको हुँदा मेरो पनि धर्म रक्षा गर्ने कर्तव्य हो । तसर्थ मैले धर्म राजनिति सुरु गरेको हुँ ।
तपाई धार्मिक संघ संगठनको नेतृत्व समेत गरेको व्यक्ति राजनितिमा प्रवेश नगरिकन नै धर्म रक्षाको लागि गतिविधि गर्न सक्नु हुन्थ्यो नि त?
मैले गर्न खोजेको र गर्दै गरेको धर्म राजनिति हो । कांग्रेस कम्युनिष्टहरु विभिन्न विदेशी वादी सिद्धान्तको नाममा देशलाई अदोगति तर्फ लगे । राजनितिको नाममा हजारौं जनता मार्ने पाप कार्य समेत गराए । देशलाई खरबौं ऋण लगाए । आज एउटा नेपाली जन्मिने बित्तिकै २४ हजारको ऋणि हुन्छ । समाज हेर्नुहोस कस्तो हुँदैछ । सदभाव छैन्, नागरिकले सामाजिक दायित्व विर्सदैछ । अनि अर्को कुरा नेपालमा भएका धार्मिक संघ संगठनहरु पनि त्यति प्रभावकारी छैनन् । राजनितिक व्यवस्था नै देशको धर्म, सद्भाव र सन्तुलन कायम गर्न सक्ने एक मात्र माध्यम भएको हुँदा मैले यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो ।
किन राप्रपा नै छान्नु भयो?
अर्को कुन पार्टी छ धर्मको रक्षार्थ लाग्ने ? ०६२, ०६३ पछिको राजनिति अवस्थामा धर्मको ‘ध’ समेत बोल्न नसक्ने अवस्थामा तत्कालीन राप्रपा नेपाल नै त्यस्तो राजनितिक दल हो जसले आफ्नो धर्म छाडेन् । राप्रपा नै त्यस्तो पार्टी हो जुन नेपाल कै शक्तिद्धारा नेपालमै स्थापना भएको, विना रक्तपातको राजनितिक पृष्ठभूमि बोकेको छ । कांग्रेस कम्युनिष्टहरु विदेशी वाद सिद्धान्त र प्रभावबाट संचालित छन् । यिनै पार्टीले सत्ता स्वार्थमा परि सनातन्त्र धर्मलाई समाप्त पार्ने विदेशी मिसनलाई सहयोग गर्ने गरी नेपाललाई धर्म निरिपेक्ष राष्ट्र घोषण गरे । यिनको वैकल्पिक शक्तिको रुपमा राप्रपाले लिएको निति र सिद्धान्त मलाई ठिक लागेको हो ।
राप्रपामा लागेर के नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुन्छ जस्तो लाग्छ, खै जनताले त विश्वास गरेको देखिन?
खै र राप्रपा जनताको घर घर पुगेको, राप्रपा राजनितिक पार्टी बन्ने क्रममा नै छ । निति सिद्धान्त र विचार मात्र भएर नहुँदो रहेछ, अहिले राप्रपालाई हेरेर बुझ्न सकिन्छ । जनतालाई बुझाउनुपर्ने रहेछ । राप्रपा बाहेक अरु कुनै राजनितिक दलले हिन्दु राष्ट्रको विषयमा बोलेकै छैनन् । धर्म निरिपेक्षको विपक्षमा संविधानसभामा मतदान गर्ने पार्टी नै राप्रपा हो नि । राप्रपा बाहेक अन्य पार्टीलाई विश्वास गर्ने आधार पनि त छैन् ।
राप्रपाले सत्तामा पटक पटक गएर एजेण्डा समेत छोड्यो भन्ने विषयले अहिले राप्रपाप्रति जनता रुष्ट देखिन्छन्, यस्तो अवस्थामा राप्रपालाई जनताले विश्वास गर्ने आधार के छ ?
सैद्धान्तिक रुपमा राप्रपा मात्र त्यस्तो एउटा राजनितिक दल हो, जसले धर्मको विषयमा २०६३ पछि बोल्दै आयो । नेपाल धर्म निरिपेक्ष कांग्रेस र कम्युनिष्ट कै कारण भएको हो, राप्रपाले धर्म निरिपेक्ष राष्ट्र बनाएको हैन्, अब ०७० पछि संविधानसभामा राप्रपाको उपस्थिति न्यून मात्र रह्यो । संविधानसभामा राप्रपाले धर्म निरिपेक्षताको विरुद्ध मतदान समेत ग¥यो । हिन्दु राष्ट्र बनाउन संविधान संसोधनका लागि विद्येयक पनि दर्ता गरायो । तर यसलाई प्रमुख दलले छलफलमा नै राखेनन् । हामी यस कुरालाई जनता समक्ष बुझाउन सकेनौं । हेर्नुहोस् , राजनितिक दल सत्तामा जानु स्वभाविक प्रक्रिया हो, त्यसो त अहिलेको स्थानीय निर्वाचन पनि स्थानीय सरकार निर्माणको प्रक्रिया नै त हो । सत्तामा गएको विषयलाई भन्दा पनि सत्तामा गएर गरेका विषयलाई जनताले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राप्रपा पहिलो पटक सरकारमा सहभागी हुँदा नेपालमा ईण्डियाको अघोषित नाकाबन्दी थियो । कांग्रेस लगायत मधेशी दलका थुप्रै नेताहरु ईण्डियाले नाकाबन्दी नलगाएको भन्दै थिए तर कमल थापा जेनेभामा नाकाबन्दीको विरोध गर्दै थिए । चीनसँग सम्बन्ध विस्तारको लागि कुटनितिक रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दै थिए । कमल थापाले नै होइनन् वृद्ध भत्ता ३ हजार प्रस्ताव गरेकोमा क्याबिनेटले २ हजार गर्ने निर्णय गरेको ? धर्म परिवर्तन गराउनेलाई कार्यवाही गर्न स्थानीय निकायलाई निर्देशन समेत दिएको? तर यि सबै कुरा हामीले जनतालाई बुझाउन सकेनौं । राप्रपा विरुद्ध भ्रम छर्ने कामहरु भई नै रहे । तर त्यो भ्रमलाई हामीले चिर्न सकेनौं । जनताले वास्तविकता नबुझेकाले गर्दा हो जनता राप्रपा प्रति रुष्ट हैनन्, माया घटेकै हो, अब विस्तारै सबै प्रष्ट हुनेनै छन् । जनताले बुझ्ने छन् ।
त्यसो भए के अब राप्रपाले पहिले कै जस्तो मत प्राप्त गर्छ त?
त्यो त अहिले नै भन्ने विषय होइन्, चुनाव नजिक छ । सबै समक्ष वास्तविकता केहि दिनमा नै प्रष्ट भईहाल्नेछन् । यति भन्छु राप्रपाले अपेक्षा गरे अनुरुपको मत प्राप्त गर्छ, त्यति जनमत घटेको छैन् ।
राप्रपाको राजनितिक हैसियत संविधान संसोधन गर्न सक्ने जनमत प्राप्त गर्ने संभावना छैन्, अब कसरी ल्याउनु हुन्छ हिन्दु राष्ट्र?
हेर्नुहोस, राप्रपाको राजनिति गरेर हिन्दु राष्ट्र ल्याउने प्रयास सिधा र शान्ति पूर्ण हो । यो बाटोबाट संम्भाव देखिएन भने अब समाज नै विग्रने भयो, धर्म नै नष्ट हुने भयो भने हाम्रो कुल परम्परा अस्तित्व समेतको रक्षार्थ हामीले हाम्रो कार्य शैलीलाई परिवर्तन गर्छौं । ठूलै आधी बेरी आउनेछन्, संघर्ष स्वरुप परिवर्तन हुनेछ । यस क्रममा केहिले साहदत पनि प्राप्त गर्नुपर्ने हुन सक्छ । रगत बग्न सक्दछ तर त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्नेछ । हामी तयार हुँदैछौं ।
तपाई कतै शसस्त्र द्धन्दको कुरा त गरिराख्नु भएको छैन् ?
हेर्नुहोस हामी धार्मिक व्यक्ति हौं, हामीले धर्म छाड्नु हुँदैन्, हामी हत्या हिंसामा विश्वास पनि राख्दैनौं । अस्तित्वको रक्षार्थ हामीले आफूलाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ मात्र भनेको हो । अर्को कुरा केहि कँही अधर्मीहरुलाई परास्त गर्न हामीले कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न कालखण्डमा त्यो भएका पनि छन् । तसर्थ अहिले यति बुझि राख्नुहोस् कि सनातन्त्र धर्म रक्षाको लागि हामी आफ्नो जिवनलाई त्यग्न समेत तयार छौं ।
के योजना बनाउदै हुनुहुन्छ त त्यस्तो ? के अब नेपाल हिन्दु राष्ट्र कायम हुन्छ त?
राप्रपाले धर्म संगठनको नेतृत्वको जिम्मा मलाई दिए यता मैले देशका विभिन्न स्थानमा गई धार्मिक व्यक्तिहरुसँग पनि भेट गरि राप्रपाको विषयमा समेत प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्दैछु । धार्मिक गुरुहरु तथा विभिन्न धर्म संघ संगठनहरुले पनि सहयोगका लागि प्रतिबद्धता व्यक्ति गर्नु भएको छ । अब हामीले धार्मिक संघ संगठन लगायत हिन्दु राष्ट्र पक्षधरहरुको जनलहर नै सडकमा उतार्ने छौं र दबाब दिने छौं । हेरि राख्नुहोस् हाम्रो आन्दोलन र अभियानले नेपाल सनातन हिन्दु सापेक्ष राष्ट्र बन्नेछ । म संकल्प गरि यो अभियानमा लागेको छु । राप्रपाका तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवार समेत भएको छु तसर्थ विश्वास गर्नुहोस् हामीले धोका दिने छैनौं, हामी हाम्रो संकल्प पुरा गरेरै छाड्ने छौं, तसर्थ राप्रपालाई भोट दिन अनुरोध समेत गर्दछु । तपाईले दिएको भोटले नै धर्म रक्षार्थ कबजको काम गर्नेछ ।